Racial profiling | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Tags:Asia, Burma, Hate Speeches, Muslim, Myanmar, Politics of Burma, Racial profiling, Rohingya people
အသားထဲကလောက်ထွက် အမျိုးသား သစ္စာဖောက်တွေရဲ့ သွေးထိုးလှူ့ဆော်မှူ၊ ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်မှ အရူးချေးပန်း မျိုးချစ်ပြသူတွေရဲ့ ဥာဏ်နည်းမှူတွေကြောင့်…
အသားထဲကလောက်ထွက် အမျိုးသား သစ္စာဖောက်တွေရဲ့ သွေးထိုးလှူ့ဆော်မှူ၊
ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်မှ အရူးချေးပန်း မျိုးချစ်ပြသူတွေရဲ့ ဥာဏ်နည်းမှူတွေကြောင့်…
၁။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတလျှောက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက်မီဒီယာတွေ အမုန်းခံရတယ် (အစိုးရအလိုရှိမှူ)
၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ် (အစိုးရအလိုရှိမှူ)
၃။ တည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ စစ်တပ် အခန်းကဏ္ဍကို အများတောင့်တအောင်
ပြုလုပ်ခဲ့တယ် (အစိုးရအလိုရှိမှူ) (more…)
Tags:Facebook, Muslim, Nationalism, Racial profiling
A Masjid in Yangon attacked by well trained “COMMANDOS”
Cho Tu Zal shared Lumin Thaungtun‘s photo.
စွမ်းအားရှင်တွေက ပြည်သူတွေကို သွေးမြေမကျ ကျအောင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရန်ကုန်မှာပါ စတင် လုပ်ဆောင်နေတယ်၊ အားလုံး သတိထားကြပါ။
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်အပြီး မြို့နယ်ရဲမူးက ဒေသခံပြည်သူ အနည်းငယ်ကို အမူမဖွင့်ပါနဲ့ မီဒီယာကို မခေါ်ပါနဲ့ဟုပြောသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွား ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွင်းပါဝင်ခဲ့သော ဆရာတော်တချို့က ရန်ကုန်မြို့အား ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်စေချင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြို့တော်ခမ်းမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးနှင့် လုံထိမ်းအဖွဲ့ အပါ အ၀င် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ကြီး ၅ ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ မှ ၂၄ နာရီ အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသော်လည်း အဆိုပါ ဖျက်စီးခံရမူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ မတွေ့ရသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
MMM မြန်မာမွတ်စလင်နက် myanmarmuslim.net က လိမ္မာပါးနပ်စွာ သုံးသပ်ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာရှယ်ကြတဲ့အခါ အဲဒီ အချက်ကို ပေါ်အောင် မွတ်စလင်နဲ့ မြန်မာတွေအကြား တမင်တကာ လှုံ့ဆော်နေတယ် ဆိုတာ ပေါ်အောင် ရေးကြပါ။
အားလုံး ညီညွတ်မှ မသမာသူတွေရဲ့ လှည့်စားခံရမှု၊ အချင်းချင်းသွေးကွဲ တိုက်ခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုတွေ ကင်းပါမယ်။ ချိုတူးဇော်
Tags:Burma, Nationalism, Racial profiling
Suggested Reference of terms for the Commission of Inquiry
Reference of terms should include:
Who is behind this plot?
Is there any intention to topple the present government and derail the Democratic changes?
Who is behind the distribution of HATE letters and HATE SPEECHES?
ရခိုင်လူ သတ်မှုဖြစ်အောင် အဓိက မှိုင်းတိုက်ပေးခဲ့တာကတော့ ရခိုင်သတင်းဌာန နိရဉ္စရာပါပဲ။ (more…)
Tags:Burma, Muslim, Racial profiling, Rakhine, Rakhine people, Rakhine State, Rohingya people, Sittwe
Racial profiling is the inclusion of racial or ethnic characteristics in determining whetheraperson is considered likely to commitaparticular type of crime or an illegal act or to behave ina“predictable” manner. … the use of race (and often nationality or religion) to identifyaperson asasuspect or potential suspect. Racial profiling is one of the ways that racism is manifested and perpetuated.
Tags:Charter of Fundamental Rights of the European Union, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Discrimination, Ethnic stereotype, John Ashcroft, List of ethnic slurs, Race and Racism, Race-Ethnic-Religious Relations, Racial profiling, Racism
Monitoring racial equality and non-discrimination by Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Tags:Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Geneva, Human rights, Human Rights and Liberties, Race-Ethnic-Religious Relations, Racial profiling, Racism, United States
I want to be free asaTumbling Kelly (Pyit Taing Htaung) but notaPuppet (Yoke Thae Yoke) with strings